Ma Rabtaa in Gabar walba aay kuu ilmeyso Ama aaysan Sinaba Kugu ilaawin Casharkaan Qaado Arimaha Bulshada | Somali music, lyrics, songs, mp3 Warwad
Ma Rabtaa in Gabar walba aay kuu ilmeyso Ama aaysan Sinaba Kugu ilaawin Casharkaan Qaado
Haweenka ayaa raga ku gala oo ku doorta tilmaamo aad u wanaasgsan oo hadii ay ka helaan ninka ay adag tahay in naftooda ay ka xakameeyaan .
Xushmadda:- haweenka ayaa aad uga helaan ninka xushmada badan oo marka ay baarka ka soo wada cunteeynayaan ka hor mara oo albaabka ka fura kursina u sii toosiya iyadoo indhaha dadka kale ay ku soo wada maqan yihiin , waxa ayna tani u muujineysa in xushmad iyo ihtimaam badan uu u hayo .
Run Iyo Kalsooni: haweenka dhab ahaan aad ayay uga helaan runta lamanaahooda , hadaba wax waliba ka run sheeg , Si Naxariis ah leh ula dhaqan saaxibadeeda :- Ogaaw saaxibadeeda waa qoys kale oo ay leedahay hadaba si naxariis leh ula dhaqan .
Ilaalinta waqtiyada balanta: waxaa waajib kugu ah in aad dhowrto waqtiyada aad balanta leedihiin oo iyana ay ku sugeyso tani waxa ay muhiim u tahay xariirkiina .
Hadiyad : -tani waa ay farxad gilisaa ee ninyahoow hadiyaad ka dhigo wehelkaada koowaad mar waliba oo aad dhankeeda u socoto .
haweeneydu waa noole dareen badan si kastoo ay u tahay mid xoogan caqli badan wax ay kugu qadarineysaa in badan heerka uu gaarsiisan yahay fahamkaad aku aadan dareemaheeda.
Fulinta Balamaha :- gaar ahaan marka aad mashquulsan tahay oo ay ku soo wacdo oo aad ku tiraahdo waan kugu soo celinayaa waa muhiim in taasi u fuliso .
Amaanta :- Ha ahaado muuqaalkeeda ama wax qabadkeeda ogaaw haweeneydu aad ayay uga heshaa maqalka erayada amaanta ah .
Soo Afjaridda Xariiradaadi Hore : -ma jecleysaneyso in ay ka wel welsho haweenka kale ee nadiif ka soo noqo wixii xariir ah ee horteed aad soo sameysay adigoo jaraya xariir walba oo aad hure usoo sameysa.
Xiliyada Cuntada: -isku day in aad xaaskaagag la cunteyso oo aad waliba afka u gal galiso adigoo had iyo goor ka faganaya in aan dad kale wax lacunto sida martida iyo saaxibadaa
Fikradaada ka dhiibo n